Mpamatsy tsara indrindra China mpamatsy fanao fanao zinc firaka kitapom-batsy aforitra latabatra kitapo hanger hook Manufacturer sy Factory | Hobrin
China mpamatsy fanao fanao logo zinc firaka kitapom-batsy aforitra latabatra fonosana hanger hook
Ny kitapo mihantona dia tantara, malefaka, fitaovana, loko, endrika, famaritana ary lamina miova tsy tapaka arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Ny tena zava-dehibe dia novelom-bolo sy lamaody ireo vokatra ary tsara ny vokatra amin'ny fanaovana dokambarotra. Safidy tsara indrindra ho an'ny orinasa ny fametrahana ny sary sy ny fampiroboroboana ny vokatra ary ny fanomezana fampiroboroboana. Ny famaritana, ny loko ary ny fanontana logo QR kaody dia azo namboarina arakaraka ny takian'ny mpanjifa, ny mpanamboatra matihanina manamboatra, ary ny vidiny dia mora vidy kokoa
Ny famolavolana sy ny fampandrosoana ary ny fitantanana matihanina an'ny orinasa dia ahitana: farango kitapo, fitaratra kosmetika, rojo vy, vovoka vovoka finday, fitaratra kosmetika, tsoratadidy, fehy finday sy pendants, corkscrews, boaty fanafody, brooch, peratra fitaratra misy divay ary kojakoja finday hafa, Fanomezana asa-tanana, sns.
Ekeo ny volavolan'ny mpanjifa
● Fitaovana avo lenta. Ireo farango kitapo azo aforitra ireo dia vita amin'ny firaka zinc miaraka amina asa fanoherana ny harafesina, lamosina mainty tsy manidina ary fanidiana magnetika.
● Ireo kojakoja fampiasa amin'ity kitapo sy paosy maivana ity dia mora manahy momba izay alehanao.
● Fanomezana tsara. Ity hook poketra ao amin'ny birao ity dia fanomezana tsy lafo, mety ho an'izay rehetra manana kitapo na kitapo. Izy io dia fanomezana tsara ho an'ny Fetin'ny Reny, fampakaram-bady, fanomezana vahiny, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, Krismasy ary tompona poketra rehetra.
● Volavola azo ahodina sy azo entina. Ity faribolan'ny kitapom-batsy ity dia manome fomba mahafinaritra ahantona amin'ny tany amin'ny latabatra sy ny gorodona hafa amin'ny toerana malalaka rehetra. Miaraka amin'ity faratra kitapom-batsy ity dia azonao atao foana ny mitazona ny kitaponao ho madio, akaiky ary azo antoka. Azonao aforeto koa izy ary ampidiro ao anaty kitapom-bolanao. metatra
Manaraka: Mpanamboatra sinoa collar identifié RFID tag QR code NFC alika biby fiompy alika RFID